Lixabiso CNC iindawo zobhedu mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
I-Brass yi-alloy eyenziwe ngobhedu kunye ne-zinc, kwaye yinto efanelekileyo yokuvelisa izixhobo ze-CNC (kuquka ne-CNC).
Brass CNC yokugaya-ngqo iinxalenye ubhedu wokugaya
I-Brass CNC yokugaya kukubeka enye okanye iqhekeza leplate kwisixhobo sokuluka esisezantsi kokuluka, kwaye isixhobo sokuluka sixhotyiswe ngezixhobo zokusika. Iipropati zoomatshini zokusika nazo zibalasele ngakumbi kunezinto zobhedu. Ityhubhu yobhedu engenamthungo ethathwe kubhedu ithambile kwaye inamandla okomelela kokunxiba. Izinto zokugaya ezichanekileyo kwi-CNC machining yeenkonzo zobhedu zifanelekile kwizixhobo zeshishini, kwikhaya elifanelekileyo, kunxibelelwano nakwiikhompyuter.
Izinto eziluncedo ze-Shanghai Ouzhan iindawo zobhedu wokugaya
- Ihlala ixesha elide
-Robust ukunxiba ukumelana
- Flexible kunye anti-umhlwa
- Kulula ukumila
-Ukuqaqamba kwamandla eqine, anti-umhlwa
Inkonzo yokugaya ubhedu eyenziwe ngokwezifiso-China Shanghai Ouzhan CNC ubhedu wokugaya iinxalenye zomvelisi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabaxumi, High-ngqo CNC yokugaya izahlulo zobhedu ezinomgangatho ozinzileyo nothembekileyo zinokuqwalaselwa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zomatshini wobhedu. Ukongeza, iimveliso ze-CNC ezibunjiweyo zibonelela ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngexabiso lobhedu lweemveliso ze-CNC kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Ukusetyenziswa kweenxalenye zobhedu wokugaya
Ezonyango kunye nezamayeza, ezomkhosi, ezomkhosi, izixhobo zekhompyutha, iithoyi, unxibelelwano ngomnxeba, njl njl. Ubhedu oluchanekileyo lwamalungu e-CNC asetyenzisiweyo anokusetyenziswa nakwizinto zasekhaya, ubunjineli kunye nobunjineli bemibhobho.
Izinto eziluncedo Ouzhan inkonzo yokugaya ubhedu
-Zonke iimveliso zobhedu ezichanekileyo ze-CNC ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
- Ngokutsho imizobo okanye iisampulu ukwenza ngqo zobhedu wokugaya iindawo.
- Kwintsimi yeentsimbi zobhedu, elona thuba lethu likhulu kukuveliswa kwesixokelelwano sobhedu, iivalves zebhola, njl.
Egqithileyo Elungiselelweyo sheet metal iindawo welding
Okulandelayo: Yenziwe ngentando steel ukujika iindawo iindawo oomatshini